Pakistan oo India ku eedeysay maalgelinta Islaam naceybka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Pakistan oo India ku eedeysay maalgelinta Islaam naceybka
Waxa uu hadalkan ka sheegay kulanka golaha loo dhan yahay ee QM oo sanadkan lagu qabtay Online-ka, isu imaatinkiina loo baajiyey COVID-19 awgiis, isagoo xusay in India maanta khatar ku heyso nolasha ku dhowaad 200 oo milyan oo Muslim ah.
“Maanta waxaa jira waddan oo aan ka xumahay in aan ku iraahdo wuxuu maalgeliyaa Islaam naceybka waana India. Sababtana waxaa ay tahay dalkaas waxaa maamula koox aamisan fekrad khaldan, waana nasiib darro in maanta India u taliyaan kuwaas,” sidaa waxaa sheegay Khaan.
“Waxay aaminsan yihiin in India Hinduugu leeyihiin inta ka soo hartayna yihiin muwaadiniin ayaga aan la mid aheyn .”
Guddi gaar ah oo QM u saartay arrinta Kashmir ayaa dowladda India ugu baaqay in ay qaado talaabo deg deg ah.
Pakistan oo India ku eedeysay maalgelinta Islaam naceybka was last modified: September 26th, 2020 by Admin
Al-Shabaab oo deegaan ka tirsan Gobalka Hiiraan ku toogtay laba nin
Akhriso:-Eng Cabdiraxmaan Yariisoow oo ka hadlayay caqabadaha ka jira sugida Amniga magaalada Muqdisho.
Akhriso:-Indonesia oo markab Deeq ku wareejisay Dowladda Soomaaliya